Ejiji na-adịgide adịgide: ihe ọ bụ, njirimara na ndụmọdụ | Green Renewables
Ejiji na-adịgide adịgide
Portillo nke German | 20/04/2022 12:00 | Gburugburu
Ecolabels na-apụtakarị n'ihu mgbe a na-ekwu maka ya ejiji ejiji, esemokwu ndị metụtara mmepụta na n'ime ime ụlọ mmepụta ihe, ma a nnukwu mgbalị iji dozie na ọzọ na ndị ọzọ eke ákwà na-adịghị egbu egbu ngwaahịa. N'ụzọ dị mma, a kwadoro nghọta a n'ụwa nile n'ihi mgbasawanye nke ụlọ ọrụ mba ụwa na ndị ọchụnta ego na-eto eto bụ ndị na-enye mgbanwe ọhụrụ na echiche nke ejiji na-adịgide adịgide.
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere adigide ejiji, ihe àgwà ya na uru bụ.
1 Ejiji na-adịgide adịgide
2 Àgwà ejiji na-adịgide adịgide
2.1 azụta nke ukwuu
2.2 Tinye ego na ụdị ejiji na-adigide
2.3 Echefula ejiji vintage na uwe aka nke abụọ
2.4 Ịgbazinye ego bụkwa nhọrọ
2.5 Zere ịkwagharị
2.6 Ghọta mmetụta nke ihe na akwa n'onwe gị
2.7 Tụlee onye na-emepụta uwe ị na-eyi
2.8 Chọọ ụdị agbadoro na sayensị
2.9 Chọọ maka ụdị ndị nwere mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi
Ntọala nke ụdị azụmaahịa ejiji na-adịgide adịgide na-agafe nchekwa nke ihe ndị sitere n'okike, mmetụta dị ala nke ebe obibi nke ihe eji eme ihe (nke a ga-enwe ike itinye ya ma emesịa n'agbụ a na-emegharị ihe), mbelata akara ụkwụ carbon na nkwanye ùgwù maka ọnọdụ akụ na ụba na ọrụ. ọnọdụ nke ndị ọrụ metụtara site na akụrụngwa ruo n'ebe ire ere.
Ụlọ ọrụ ejiji enweelarị ọtụtụ ndị ama ama ndị na-emepụta ihe, ụdị na ndị ama ama bụ ndị meriri ejiji na-adigide. Ndị a gụnyere Lucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Angeles, Amour Vert, Edun, Stewart+Brown, Shalom Harlow na Summer Rayne Oakes.
Ejiji na-adịgide adịgide na-eji nwayọọ nwayọọ na-achọta ọnọdụ ya na ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa enweela ọganihu na nhazi nke asọmpi, ememme, klaasị, mmemme ntinye, ozi ọkachamara na blọọgụ na ndị ọzọ..
Dịka ọmụmaatụ, Izu Ejiji Portland, nke emechara n'oge na-adịbeghị anya na US, nwere naanị 100% atụmatụ eco-friendly. Na isi obodo Spanish, The Circular Project Shop ka ewepụtara n'afọ a na mbọ iji nweta nkwado na asọmpi Madrid catwalk site n'inye uwe na-adịgide adịgide. Emebekwara ụbọchị Ejiji Sustainable na Madrid afọ anọ. Na Argentina, Verde Textil na-enye ngwaahịa na-enweghị mmetụta gburugburu ebe obibi na ntinye 100% nke ọha mmadụ, mgbe ọ na-ere n'ịntanetị.
Otu ikpe kwesịrị nlebara anya pụrụ iche bụ nke Heavy Eco brand, ụlọ ọrụ ejiji mbụ e guzobere n'ụlọ mkpọrọ, na-emepụta uwe na-adịgide adịgide. Na mgbakwunye na ọrụ mweghachi nke ihe karịrị 200 ndị omempụ Estonia bụ ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, 50% nke uru na-aga iji nyere ndị na-enweghị ebe obibi na ụmụ mgbei aka n'obodo Tallinn.
Àgwà ejiji na-adịgide adịgide
azụta nke ukwuu
Ọ bụ ụzọ kasị mma isi ejikwa ọtụtụ narị ijeri uwe ndị a na-emepụta gburugburu ụwa kwa afọ. Harriet Vocking, onye na-enye ndụmọdụ maka ụlọ ọrụ atụmatụ na-adigide Eco-Age, na-atụ aro ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ atọ tupu ịzụrụ uwe: «Kedu ihe anyị chọrọ ịzụta na gịnị kpatara? Gịnị ka anyị chọrọ n'ezie? Anyị ga-eji ya ma ọ dịkarịa ala ugboro iri atọ dị iche iche ".
Tinye ego na ụdị ejiji na-adigide
Ugbu a anyị kpebiri ịzụrụ na anya karịa, kedu ụzọ ka mma iji kwado ụdị ndị doro anya na-agba mbọ ịdịgide. Dịka ọmụmaatụ, Collina Strada, Chopova Lowena ma ọ bụ Bode na-eji ihe emegharịrị emegharị n'ụdị ha. Ọ na-enyekwara gị aka nzacha ụdịdị dị iche iche dabere n'ụdị uwe ha nwere n'ahịa, ma ọ bụ uwe egwuregwu na-adịgide adịgide dị ka mkpokọta enyi nwanyị ma ọ bụ Indigo Luna, uwe igwu mmiri dị ka Stay Wild Swim ma ọ bụ Natasha Tonic, ma ọ bụ denim dị ka Outland Denim ma ọ bụ Re/inye onyinye.
Echefula ejiji vintage na uwe aka nke abụọ
Site na nyiwe dị ka The RealReal, Vestiaire Collective ma ọ bụ Depop, ịzụ ahịa maka ejiji vintage na uwe aka nke abụọ adịbeghị mfe. Chee na ị gaghị enye naanị uwe ohere nke abụọ, mana ị ga-enye aka belata mmetụta gburugburu ebe obibi nke uwe gị. Ejiji vintage nwekwara nnukwu uru na uwe ya bụ ihe pụrụ iche n'ezie. Ọ bụrụ na ọ bụghị, lee ka Rihanna ma ọ bụ Bella Hadid si ele anya, nnukwu Fans.
Ịgbazinye ego bụkwa nhọrọ
Mgbe anyị nwere agbamakwụkwọ ma ọ bụ gala na-adịghị ahụkebe (n'ihi COVID, n'ezie), nhọrọ kacha mma bụ ịgbazite uwe anyị. Dịka ọmụmaatụ, ọmụmụ na nso nso a na UK kwubiri na obodo ahụ na-azụta uwe nde 50 n'oge okpomọkụ ọ bụla ma na-eyi naanị otu ugboro. Mmetụta, nri? O doro anya na ọ ka mma ịmalite omume a, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-atụle na sekọnd ọ bụla na-agafe bụ otu gwongworo nke ihe mkpofu akwa na-ere ọkụ (ma ọ bụ na-ejedebe na ebe a na-ekpofu ihe).
Ụdị achọpụtala na anyị na-amata akara ukwu nke gburugburu ebe obibi anyị. Ọ bụ ya mere ha ji agbalịkarị ịbanye n'ime ngwaahịa ndị nwere nkwuputa na-edoghị anya nke nwere ike iduhie ma ọ bụ na-akọwahie ogologo uwe ha. Ejila mmegharị anya ndụ ndụ ghọgbuo gị ma agabigala ihe a na-ekwu "na-adigide", "acha ndụ ndụ", "ọrụ" ma ọ bụ "mara" nke ị ga-ahụ n'ọtụtụ akara. Lelee ma ihe ha na-ekwu ọ̀ bụ eziokwu.
Ghọta mmetụta nke ihe na akwa n'onwe gị
Mgbe ị na-azụ ahịa nke ọma, ọ dị mkpa ịghọta mmetụta ihe ndị na-akpụzi uwe anyị. N'ikwu okwu n'ụzọ dị mfe, ezigbo iwu n'ozuzu bụ izere ihe ndị na-emepụta ihe dị ka polyester (ihe anyị na-ahụ na pasent 55 nke uwe anyị na-eyi) n'ihi na ihe mejupụtara ya gụnyere mmanụ ọkụ ma na-ewe ọtụtụ afọ ire ere. I kwesịkwara ịṅa ntị na akwa eke. Ọmụmaatụ, organic owu na-eji nnọọ obere mmiri (na ọ dịghị pesticides) mgbe tolitere karịa omenala owu.
Ihe kacha mma anyị nwere ike ime bụ ịchọ uwe nwere asambodo na-adịgide adịgide iji hụ na akwa na ihe ndị ha na-eji enwe mmetụta dị nta na mbara ala: dịka ọmụmaatụ, Global Organic Textile Standard maka owu na ajị anụ; Asambodo otu ndị na-arụ ọrụ akpụkpọ anụ maka akpụkpọ anụ ma ọ bụ adhesives asambodo Council Stewardship Council maka eriri rọba.
Tụlee onye na-emepụta uwe ị na-eyi
Ọ bụrụ na ọrịa na-efe efe emeela ihe ọ bụla, ọ bụ iji gosipụta ihe isi ike kwa ụbọchị nke ọtụtụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ akwa na-enweta. Yabụ ọ dị oke mkpa ịhụ na ha nwetara ụgwọ ọrụ ndụ ma nwee ọnọdụ ọrụ ziri ezi. Ụdị ntụkwasị obi nke na-ekpughe ozi gbasara amụma ụgwọ ọnwa ha, iwere ọrụ na ọnọdụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe ọ bụla ha nọ.
Chọọ ụdị agbadoro na sayensị
Otu ụzọ isi mara ma ụlọ ọrụ nwere ezi mmasị ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi ya bụ ịhụ ma ọ na-agba mbọ na ụkpụrụ sayensị na-adịgide adịgide. Ụdị ndị na-agbaso usoro ntụzịaka nke sayensị, gụnyere Burberry ma ọ bụ Kering, ndị nnukwu ụlọ ọrụ okomoko dị n'azụ Gucci ma ọ bụ Bottega Veneta, ka achọrọ ịgbaso nkwekọrịta Paris maka ibelata ikuku ikuku.
Chọọ maka ụdị ndị nwere mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi
Ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide dị ka Mara Hoffman ma ọ bụ Sheep Inc na-eche echiche banyere otú ha nwere ike isi nwee mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi na mgbakwunye na ibelata mmetụta ha. oru ugbo na-emeghari ohuru, onye mmeri nke usoro ugbo dị ka ịgha mkpụrụ ozugbo ma ọ bụ ihe ọkụkụ, na-enweta nkwado ụlọ ọrụ na-arịwanye elu na ebumnuche doro anya: iji melite ogo ala na ichekwa ụdị ndụ dị iche iche.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ejiji na-adigide na mkpa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ejiji na-adịgide adịgide
Gịnị bụ ogige ntụrụndụ mba